Dhacdooyinka soo socda - Ololaha Caalamiga ah ee Nabadda Waxbarashada
Gali Goobta. Ka raadi Dhacdooyinka Goob.
November 2 - December 6 noq
Waxbarashada Nolosha Kulanka Adduunka
Webinar / Dhacdo Virtual ah
Kulanka Adduunka ee Waxbarshada Nolosha (Noofambar 2-6, 8) waa mashruuc ujeedadiisu tahay in la milicsado oo la abuuro wadahadal ku saabsan waxbarashada, hababka nolosha ee aan qaadannay bini'aadanti ahaan iyo suurtagalnimada in lagu beddelo waxbarasho kale.
Shirkii 3aad ee Caalamiga ah – Paulo Freire: Dhaxalka Caalamiga ah
Shirka 3aad ee Caalamiga ah - Paulo Freire: Dhaxalka Caalamiga ah (Noofambar 29-Dec 2), wuxuu kulmi doonaa barayaasha, aqoonyahannada, ardayda, cilmi-baarayaasha, iyo xirfadlayaasha si ay u muujiyaan heerka hadda ee fekerkiisa barbaarin iyo codsigeeda oo dhan oo kala duwan oo kala duwan. maadooyinka tacliinta.
Waxbarida Nabada, Cadaalada iyo Daryeelka Planetary ee leh Rev Dr Leonisa Ardizzone (dib u gurasho/tabobar)
Dharmakaya Center for Wellbeing 191 Cragsmoor Road, Cragsmoor, NY
Ku biir Rev Dr. Leonisa Ardizzone todobaadka immersive iyo wadahadalka (Diseembar 3-5) sahaminta qiyamka iyo dhaqamada Waxbarashada Nabadda ee barayaasha, maamulayaasha, qabanqaabiyeyaasha bulshada, barayaasha diinta, hoggaamiyeyaasha maxalliga ah, iyo dhaqdhaqaaqayaasha.
Koorso Shahaado ah oo ku saabsan HAWEENKA, NABADA & AMNIGA
Koorsada khadka tooska ah
Koorsada khadka tooska ah (Dec. 3-18) waa koorsada calanka ee Shabakada Gobolka Haweenka halkaas oo ka qaybgalayaasha la xushay ay fursad u helayaan inay la falgalaan oo ay la taliyaan dhakhaatiirta nabadda ee haweenka, xirfadlayaasha sharciga dumarka iyo dhaqdhaqaaqayaasha caanka ah maahan oo keliya Koonfurta Aasiya laakiin sidoo kale waxay ka socdaan gobolada kale ee aduunka.
January 17, 2022 - February 27, 2022
Dagaalka iyo Deegaanka (Koorso Online ah)
Iyada oo ku saleysan cilmi baarista nabadda iyo amniga deegaanka, koorsadan khadka tooska ah ee World BEYOND War waxay diiradda saareysaa xiriirka ka dhexeeya laba khatarood oo jira: dagaal iyo masiibo deegaan. (Janaayo 17 - Febraayo 27, 2022)
January 24, 2022 noq
Maalinta Waxbarashada Caalamiga ah
Tacliintu waa xuquuq bini aadam, danta guud iyo masuuliyad guud. Golaha Guud ee Qaramada Midoobay wuxuu ku dhawaaqay 24 Janaayo inay tahay Maalinta Caalamiga ah ee Waxbarshada, iyadoo loo dabaaldegayo doorka waxbarashada ee nabadda iyo horumarka.
February 20, 2022 noq
Maalinta Caalamiga ee Cadaaladda Bulshada
On 26 November 2007, Golaha Guud wuxuu ku dhawaaqay in, laga bilaabo kalfadhiga saddexaad iyo seddexaad ee Golaha Guud, 20 Febraayo ayaa loo dabaaldegi doonaa sannad kasta sida Maalinta Caalamiga ah ee Caddaaladda Bulshada.
April 22, 2022 noq
Sannad kasta markay tahay 22-ka Abriil, Maalinta Dunida waxay xustaa sannad-guurada dhalashada dhaqdhaqaaqa deegaanka ee casriga ah sanadkii 1970-kii.
June 19, 2022 noq
Juneteenth: xuska dhamaadka addoonsiga iyo wicitaan ficil
Juneteenth waa xuska qaran ee ugu da'da weyn ee laga xuso dhamaadka addoonsiga Mareykanka. Sanadka 2020, Dhaqdhaqaaqa Nolosha Madow, oo ay weheliyaan ururo kale, wuxuu ku boorinayaa qof walba inuu kaqeybqaato howlaha Juneteenth ee deegaanka.
Maalinta Caalamiga ah ee Ciribtirka Rabshadaha Galmada ee Colaadda
Qaramada Midoobay waxay ku dhawaaqeysaa 19-ka Juun ee sanad kasta Maalinta Caalamiga ah ee Tirtiridda Rabshadaha Galmada ee Colaadda, si kor loogu qaado wacyiga baahida loo qabo in la joojiyo rabshadaha galmada la xiriira ee khilaafaadka, si loo sharfo dhibbanayaasha iyo kuwa ka badbaaday rabshadaha galmada adduunka, iyo inaan maamuuso dhammaan kuwa geesinimada naftooda u huray ee naftooda ku waayey u istaagga ciribtirka dambiyadan.
August 6, 2022 noq
Maalinta Hiroshima waxaa sanad walba la xusaa 6 -da Ogosto sanad -guuradii qaraxii atomiga ee Hiroshima iyo Nagasaki 1945 -kii.
August 9, 2022 noq
Maalinta Nagasaki waxaa sanad walba la xusaa 9 -ka Ogosto sanad -guuradii qaraxii atomiga ee Nagasaki 1945 -kii.
August 12, 2022 noq
Maalinta Caalamiga ah ee Dhalinyarada waxaa la xusaa sanad walba 12-ka Ogosto, iyadoo bulshada caalamka loo soo bandhigo arrimaha dhalinyarada isla markaana loo dabbaaldego awoodda dhallinyarada ee la-hawlgalayaasha bulshada adduunka ee maanta.
|Dhacdada soo noqoshada (Fiiri dhamaan)
Dhacdo sanad kasta dhacda oo bilaabata 12:00 am subaxnimo maalinta 21ka Sebtember, oo soo noqnoqota aan la cayimin
Sannad kasta Maalinta Caalamiga ah ee Nabadda ayaa laga xusaa adduunka oo dhan 21 Sebtember.
October 5, 2022 noq
Maalinta Macallimiinta Adduunka
Waxaa la qabtaa sanadkiiba 5-tii Oktoobar ilaa 1994, Maalinta Macallimiinta Adduunka waxaa lagu xusaa sannad-guuradii ka soo wareegtay markii la qaatay talo-bixintii ILO / UNESCO ee ku saabsanayd Xaaladda Macallimiinta. Talo soo jeedintani waxay dejineysaa jaangooyooyin la xiriira xuquuqda iyo waajibaadka macalimiinta iyo heerarka loogu talagalay diyaarinta bilowga ah iyo waxbarashada dheeriga ah, qorista, shaqada, iyo xaaladaha barista iyo barashada.
October 11, 2022 noq
Maalinta Caalamiga ee Gabdhaha
Tan iyo sanadkii 2012, 11-ka Oktoobar waxaa loo aqoonsaday maalinta caalamiga ah ee gabdhaha. Maalinta ayaa looga dan leeyahay in la muujiyo oo wax laga qabto baahiyaha iyo caqabadaha gabdhaha soo food saara, iyadoo la dhiirrigelinayo awoodsiinta gabdhaha iyo fulinta xuquuqdooda aadanaha.
November 20, 2022 noq
Maalinta Carruurta Adduunka
Maalinta Carruurta Adduunka ayaa markii ugu horreysay la aasaasay 1954-kii iyada oo loo aqoonsaday maalinta caalamiga ah ee carruurta waxaana la xusaa 20 November sannad kasta si kor loogu qaado wadajirka caalamiga ah, wacyigelinta carruurta adduunka oo dhan, iyo horumarinta daryeelka carruurta.